बर्लिनका लागि सुझाव - जर्मनी - 10 भ्रमणहरू - 1aviagem.com
बर्लिन मा सुझाव - जर्मनी - 10 स्थलहरु
अघिल्लो पोस्ट: फलामको कपडा कसरी इस्त्री गर्ने
अर्को पोस्ट: चिलीको पहिलो यात्रामा एक ज्वालामुखी र चमत्कार
पोष्ट गरिएको7मार्च 2019 द्वारा रोमोमो लुकाना
जर्मनीको बर्लिन बर्लिनबाट हामीले कस्तो आशा गर्नुपर्छ? यी सुझावहरू सबैको लागि हो जुन त्यहाँ आफ्नो पहिलो यात्रा गर्दछ।
यदि त्यहाँ एउटा चीज हो कि बर्लिनको भ्रमणको लागि ऐतिहासिक स्थान हो। यसको धेरै भन्दा एक ऐतिहासिक मूल्य छ, दीवारबाट, जुन संसारको प्रसिद्ध छ, बर्लिन पर्खाल; सभाघरहरूमा, मेट्रो स्टेशनहरू, स्मारकहरू, पार्कहरू, वर्गहरू, गेटहरू र ट्राफिक रोशनीहरू पनि पास पारेर! छोटो समयमा, शहर इतिहास साँस हुन्छ, किनकि यो महाकाव्य थियो जहाँ पहिलो र दोस्रो विश्व युद्धका घटनाहरू देखा पर्छन्। सत्यलाई भनिएको छ, बर्लिन मानवभरको इतिहास परिवर्तन गर्न आउँदछ र सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक परिवर्तनको लागि उत्तरदायी छ, जबसम्म हामी सभ्यता पुग्छौं जब हामी आज यो जान्दछौ।
त्यसो भए त्यहाँ बस्नुहोस् र हामीसँग के बर्लिनको पहिलो यात्रामा भ्रमण गर्ने सुझावहरू छन्।
कुन भ्रमण गर्ने?
म छोटो हुन प्रयास गर्नेछु र शहरमा कुन भ्रमण गर्ने शीर्ष 10 सूची बनाउनेछु।
1- बर्लिन पर्खाल
मलाई लाग्छ यो मुख्य वस्तु हो, जुन बर्लिन भ्रमण गर्ने सबैका लागि अनिवार्य छ।
1965 मा पर्खाल
र किन? सबै अर्थ र इतिहासको लागि उहाँले उहाँसँग ल्याउनुहुन्छ। पर्खाल पूंजीवाद र समाजवाद को बीच दुनिया को विभाजन को अंतिम प्रतिनिधित्व थियो। उहाँको कथाले मानिस कसरी पागल गर्न सक्छ, नतिजाहरु को नतीजा बिना विचित्र चीजहरू देखाउन सक्छ। अनि पनि किन जनसंख्यालाई नजिकका मानिसहरूको कार्यलाई पछ्याउन आवश्यक छ र न केवल क्रमशः आदेश पालन को लागी।
1989 मा बर्लिन पर्खाल को गिरावट जर्मनी, नातेदार को पुनर्मिलन को शहर को एक reconnection देखाउँछ र गाढा अवधि विजयी, सबै दुनिया भर बस्थे। म यसलाई दक्षिण अफ्रीका मा रंगभेद अन्त बराबर हुनेछ भन्न हिम्मत।
बर्लिन पर्खाल को मलबे को बीच मा एक जन्म जन्मयो। भविष्यको लागि आशा।
2- चेकपोइन्ट चार्ली
यो एक सैन्य पोस्ट थियो जब दीवार अस्तित्वमा थियो र पश्चिम बृहत् बर्लिन को बीच सीमा को रक्षा गरे र शहर विभाजित भएको थियो। एक तरफ बाट CITY को अर्कोतिर। र मैले यस शहरलाई हाइलाइट गरे किनभने हामी देशहरू बीच सीमा सीमा नियन्त्रणको बारेमा कुरा गर्दैनौं तर एकै देशको शहर भित्र। यो धेरै विचित्र छ। कल्पना गर्नुहोस् एक दिन जागिर र तपाईंको परिवार, वा साथीहरू भेट्न सक्षम हुदैन, केवल किनकि तिनीहरू शहरको अर्को छेउमा छन्?
खैर, हरेक नियमको अपवाद छ र यस अवस्थामा यो कुनै फरक थिएन। चेकपोइली चार्लीमा तपाईं बर्लिनको एक अर्को तिरबाट अर्को तिर जान सक्नुहुनेछ। तर, तपाईं सहयोगी बलों वा विदेशी राजनैतिक दलको सदस्य हुनुपर्दछ। र स्पष्ट रूपमा पारित पार।
आजकल, यो पर्यटकहरु को सबैभन्दा ठूलो भीड संग एक स्थान हो। सबैले घरको तस्विर लिन र प्रसिद्ध साइन इन गर्न चाहानुहुन्छ "तपाइँ अमेरिकी क्षेत्र छोड्दै हुनुहुन्छ"! तपाईं अमेरिकन क्षेत्र छोड्दै हुनुहुन्छ।
3- अलेक्जेंडरप्लाट र टिभी टावर
यो एक ठूलो, बर्लिन स्क्वायर व्यस्त छ। यो शहरको मुख्य मेट्रो स्टेशनहरु मध्ये एक छ। खरिद विकल्पहरूको साथ पनि एक ठाउँ हुनुको साथै, धेरै रेखाहरू पनि पास गर्नुहोस्।
A टिभि टावर (फर्नेश्वरुर) जो यस वर्गमा छ, विशाल छ, 368 मीटर छ र बर्लिनमा सबैभन्दा ठूलो संरचना हो। यो एक प्रसारण टावर हो। यसको अतिरिक्त यसमा यसमा मनोरम रेस्टुरेन्ट रहेको छ जुन शहरबाट 360 डिग्री अवलोकन गर्दछ। यो पनि घुमाउदै छ, त्यसैले तपाई कुर्सीबाट उठ्नु भन्दा पनि शहर हेर्न सक्नुहुन्छ! (एक पूर्ण गोद 30 मिनेट बारेमा रहन्छ)।
अलेक्जेंडरप्लाटमा टिभी टावर
अनि किन टाउको ऐतिहासिक छ?
टिभी टावर सबै बाहिर खडा र पूंजीवाद भन्दा समाजवाद को विजय प्रतिनिधित्व एक भवन हुनुपर्छ। विचार टिभी टावर क्षेत्र सोभियत उपग्रह Sputnik (पहिलो उपग्रह अन्तरिक्ष मा सफलतापूर्वक पठाइयो) सम्झना र रंग रातो, समाजवाद को रंग हुनुपर्छ भन्ने छ। तर architect ब्रुनो Flierl को धातु रंग समाजवादी देशहरूको प्राविधिक श्रेष्ठता प्रतिनिधित्व, को Sputnik उपग्रह संग थप समानता देखाउँछ कि औंल्याए।
आर्किटेक्चर फ्रिट्ज Dieter, Günter FRANKE, वर्नर Ahrendt वाल्टर Herzog र हाइन्ज Aust जस्तै अन्य वास् योगदानहरू संग, Henselmann हरमन र Jörg Streitparth थियो।
4- ब्रान्डेनबर्ग गेट
ब्रान्डेनबर्ग गेटको शीर्ष
स्वेच्छा ब्रान्डबर्गबर्ग गेट्स थिए जसले बर्लिन सम्म पुग्यो जब शहर अझै सानो थियो र एक प्रकारको किल घनिष्ठ भयो। आज शायद बर्लिन मा सबैभन्दा प्रसिद्ध पोस्टकार्ड हो। ब्रान्डेनबर्ग गेट केन्द्रीय जिल्लामा पेरिसर प्लाज्जमा अवस्थित छ।
5- सिटी पार्क वा Tiergarten
यो न्यूयर्क मा "केन्द्रीय पार्क" को बराबर वा "ब्राजिलिया मा सिटी पार्क" हुनेछ। यो बर्खास्त गर्न चाहनेहरूको लागि भेटिएको लायक छ र बर्लिन शहरमा यति धेरै ऐतिहासिक इमारतहरु बीच ताजा हावा सास।
6- भूत स्टेशन - "भूत स्टेशन"
केहि मानिसहरू जान्दछन् तर बर्लिनमा एक प्रेत मेट्रो स्टेशन हो। त्यहाँ कुनै मेट्रो कारहरू छैनन्, कुनै बोर्डिंग वा डिजाईन छैन। र नहीं, त्यो प्रेत छैन। (वा कम्तिमा मलाई थाहा छैन)। तर क्रमशः शासनबाट बचाउन यो ऐतिहासिक हो।
यो एक विश्वव्यापी युद्ध पछि र बर्लिन पर्खालको निर्माण पछि एक मेट्रो स्टेशन संरक्षित छ। सबवे सुरंग मान्छे पूर्वी बर्लिन देखि पश्चिम बर्लिन सम्म बित्यो। यो विचार सजिलो थियो। किनकि यो जाने सम्भावना थिएन, किनकी एक संरक्षक पर्खाल शहर को विभाजित थियो। त्यसपछि हामी तल जान्छौं, सबवे सुरंगको फाइदा उठाउँदै।
अनि के भयो?
सरकारले पत्ता लगाएको छ कि मानिसहरूले यो क्रसिंग (जसलाई कानूनको उल्लङ्घनको उल्लङ्घन गरे) र पारित गर्न रोक्ने निर्णय गरे। समस्या यो हो कि तिनीहरूले एकैचोटीमा दुवै ढोकाहरू अवरुद्ध गरीन् र उनीहरु पनि त्यहाँ जान्न चाहन्नन्। भन्न आवश्यक छैन, अर्को पक्ष त्यहाँ पुग्ने प्रयासमा धेरै मानिस मरे। यसैले यो भूत स्टेशन भनिन्छ। किनभने त्यहाँ त्यहाँ दफन भएका व्यक्तिहरूको। र यो बर्लिन विभाजनको दुखी इतिहासमा राखिएको संरक्षित गरिएको थियो, यो भूमिगत स्मारकको बराबर हुनेछ। बहालीको बावजूद यो 1960 को डिजाइन संग बनी रहयो हो, यो पृथक भएको थियो जब त्यो समय को टेलीफोन र रेलहरु लाई सम्भव छ। त्यसैले कुनै मेट्रो रेलहरू पास पारिएको छैन।
7- हिटलर बङ्कर वा फररबर्नर
जान्नुको अर्को स्थान फाउरबर्नाकार हुनेछ।
यो स्थान जहाँ हिटलरले आफ्नो सरकारको शिखर सम्मेलन गरे र युद्धको आफ्नो रणनीतिको योजना थियो।
यो बंकर5मिटर गहिरो देखि गहिरो थियो र यसको लागी कंक्रीटको थप4मीटर थियो। यो विचार एयर हडतालबाट सुरक्षित गरिएको छ। (हामी दोस्रो युद्धको परिदृश्यबारे कुरा गरिरहेका छौं?)।
हिटलरको शरीर मृत फेला परेको छ। यो भनिएको छ कि उनले आफ्ना सैनिकहरूलाई उहाँलाई मार्न आग्रह गरे, किनकि उनको सरकारले सहयोगी सेनाले आफ्नो आक्रमण र स्थानको अन्त्यको अन्त्य गर्दथे, उसलाई थाह थियो कि उनी मर्नेछन्। त्यसपछि आफ्नो बिरामी दिमागमा नाजीले दुश्मनको हातले मारेको भन्दा बढी मान्य हुनेछ। कुनै पनि यो साहस थियो किनभने, उहाँले आत्महत्या गरिसक्नुभयो समाप्त भयो त्यसैले यो आक्रमणकारी सेनामा दिनुपर्ने थिएन।
यस स्थानको ऐतिहासिक महत्व र बोझ यसले ल्याउँछ, नयाँ जर्मनीले निर्णय गर्यो कि यो बंकर ध्वस्त गर्न र यसलाई एक वर्ग बनाउन को लागी राम्रो हुनेछ। यो नयाँ अर्थ ल्याउन र समाजमा ठाउँ ठाउँ फर्किरहेको थियो। बंकर पनि फिल्म मा "पतन, हिटलरको अन्तिम घण्टा" मा देख्न सकिन्छ
हिटलर बंकरको स्थान
8- जर्मन संसद या रिचस्टाग
राइजिस्टग महल (यो हैशटै ठिक छैन ?! LOL 😂 😂) जहाँ हिटलरको पागलपन र पागलपनको सम्पूर्ण इतिहास सुरु भएको थियो। गुमनाममा आगो थियो, सम्भवतः एक कम्युनिस्ट उत्तेजकले गर्दा, जुन समय मा गिरफ्तार गरिएको थियो। एडल्फ हिटलर, जो कि समय मा जर्मन चांसलर थियो, स्थिति को लाभ ले लिया र राष्ट्रपति (जो आसानी से स्वीकार किए गए) को रिचस्टैग डिप्टी बनाने के लिए सिफारिश की। यो निर्णयले मानिसहरूको मानवीय अधिकार हटाइयो। र नाजी भाषणको सुरुवात। यो त्यहाँ थियो कि अन्य अनुच्छेदहरु लाई बर्लिन पर्खाल को निर्माण जस्तै जस्तै दिइएको थियो। उनको गुंबद भ्रमण गर्न नबिर्सनुहोस्।
9- होलोकास्ट मेमोरियल
यो स्मारक बदलिने हाइट्स को 2.711 ठोस ब्लक र एउटा असमान तल्ला को आगन्तुक दुःखको, डर र कठिनाई हिड्ने को भावना ल्याउन खोज्ने निर्माण भएको थियो। त्यो हिटलर सरकार समयमा यहूदीहरूलाई के भयो थियो। त्यहाँ स्मारक र यहूदीहरू बारेमा थप जानकारी प्रदान गर्दछ कोठा छ।
होलोस्कोस्ट स्मारकको अन्त
10- ट्राफिक लक्षणहरू देखाउनुहोस् (एम्पेलमन)
मैले यो पोष्टको शुरुमा भने भने, बर्लिनमा सबै कुरा इतिहास छ! यहां सम्म कि प्रकाशले यसलाई सानो बनाउँछ।
एम्पाल्मनम, वा जर्मन, एम्पाल्मिन्निनचेन - सबैभन्दा बर्लिन प्रतीक हो जुन तपाईं बर्लिनमा देख्नुहुनेछ। उहाँ सानो गुडिया ट्राफिक रोशनीबाट फरक हुनुहुन्छ।
एम्पाल्मन किन महत्त्वपूर्ण छ?
यसले पूर्वी बर्लिनलाई सङ्केत गर्दछ, यो प्रतीकले तपाईंलाई एक शहरलाई जहाँ तपाईं शहरमा अवस्थित हुन सक्दछ। पश्चिमी भागमा ट्राफिक लाइट सबै भन्दा सामान्य मानकमा परिवर्तन गरियो।
यसको अलावा यो एक मनोवैज्ञानिक, ड्राफ्टमैन, डिजाइनर द्वारा यो सबै एक साथ एक व्यक्ति को एक साथ मा विकसित भएको थियो। उनको श्रीमतीले प्रतीकको विकासको पछि लागे र आजको परिवारको सबैभन्दा ठूलो प्रतीक हुनेछ भन्ने निर्माणको क्रममा उनी धेरै सहयोग दिए।
कार्ल पिएगलाउले एम्पेलम्यानलाई "भ्रामक र कार्यात्मक" बनाउन। दुई गुडियाहरू (स्टप र पैदल यात्री पैदल) बाट कम दृष्टि संग मान्छे को दृश्य क्षेत्र सुधार गर्न डिजाइन गरियो। ह्याटको शैलीलाई चिन्ह लगाउने बाहेक अझै टोपीले पनि आंदोलनको धारणा सुधार गर्न मद्दत गर्दछ। कार्ल पिएगलाउको अनुसार: "क्षेत्र ठूलो, ठूलो प्रकाश, अझ राम्रो दृश्यता"।
यसको अतिरिक्त, "cuddly" गुड़िया थियो, राम्रो मनोवैज्ञानिक अपील मान्छे को लागि यातायात प्रकाश को देखने को लागि हुनेछ।
विश्वमा कुनै अन्य ट्राफिक लाइट प्रतीक पूर्व एम्पाल्मैननिचको रूपमा प्राविधिक र मनोवैज्ञानिक पहलुहरुका साथ ध्यानपूर्वक विकसित गरिएको थियो। यसको सृजनात्मक जीवन बर्लिनको संग सम्बन्धित छ।
यहाँ हामी बर्लिनको लागि हाम्रो भ्रमण सुझावहरू पूरा गर्दछौँ। र तपाईंसँग एक थप टिप छ? यो सूचीमा कुनै पनि अन्य ठाँउ हुनुपर्छ?
टिप्पणीहरूमा त्यहाँ छोड्नुहोस्। र यदि तपाईं चाहानुहुन्छ, मजा लिनुहोस् र साझा गर्न नबिर्सनुहोस्।
अर्को सम्म 😎!
कसरी Alemanha Berlim कसरी पहिलो यात्रा